Njava – Is’art Galery
Manamarika ny fahavalo taona nilomanosany tao anatin’ny fanomezan-danja ny tontolon’ny zavakanto ny Is’Art Galery. Ho fararanon-danonana ity faran’ny herinandro ity eny Tsiadana, satria dia homena sehatra ireo karazan-kanto marolafy. Anio alina, ohatra, hisy ny fampisehoana izay iarahana amin’i Monika, Dozzy ary Maximin,izy samy mpikambana ao anatin’ny tarika Njava.
Mialoha izany anefa, amin’ny 4 ora dia efa hisy ny fakana sary miaraka amin’ny ravaka izay efa nomanin’ireo mpanakanto mpisehatra ao amin’ny Is’Art Galery. Amin’ny 5 ora kosa ny fanokafana, miaraka amin-dry Madagaslam. Hitohy amin’ny fampisehoana marolafy, ahitana slam, dihy, hira arahina fandefasana horonantsary ravaka sy mirindra izany avy eo. Amin’ny 7 ora kosa ny fampisehoana iarahana amin’i Sarandra Beloba, mialohan’ny hiakaran-ny tariaka Njava amin’ny 9 ora sy sasany alina.
Piment Café – Iraimbilanja
Efa maromaro ihany izay niarahana tamin’ny tarika Iraimbilanja tao amin’nyPiment café Behoririka izay. Ny nampitovy azy rehetra? Hipoka mpankafy hatrany ny efitrano. Azo antoka fa mbola toa izay no hitranga anio, manomboka amin’ny 9 ora alina, satria anjaran-dry Batata sy ny tariny indray ny manafana ity toerana ity. Toa ny mahazatra ihany koa, hamerina ireo hirany rehetra nanamarika izay 30 taona mahery izay ny Iraimbilanja. Fanampiny ankafizan’ny mpamonjy “cabaret” ihany koa ny famerenan-dry zalahy ireo hiran’ny tarika vahiny ankafiziny.
Samoëla – AFT
Anio, manomboka amin’ny 7 ora alina, ilay fampisehoana hotontosain’i Samoëla ao amin’ny AFT Andavamamba. Fanombohana ny taom-pampisehoana ho an’ity mpanakanto ity sy ny mpankafy azy. Miala kely amin’ny “cabaret” izay nahazatra, satria tena fampisehoana feno ny ao amin’ny AFT. Fotoana hizarana ny “Mandeha ny mandeha”, anisan’ireo hira vaovaon’i Samoëla izay nalaza vetivety koa izany.
Tovo J’hay sy Tosy – Sk Melody
Ela izay! Efa an-taony maro mihitsy no niandry ny fiakarana an-tsehatra ataon’i Tosy ny mpankafy. Efa ela toraka izany koa no tsy nisy ny fampiaraham-peo teo aminy sy i Tovo J’Hay. Ho tanteraka izany anio, eny amin’ny SK melody, manomboka amin’ny 9 ora alina. Fotoana ahenoana indray ireo hiram-pitiavana anaty fampiaraham-peo, efa nahafantarana ireto mpanakanto ireto.